Oomama - iBezzia | IBezzia
Yiba ngumama Ngumzuzu obalulekileyo kubomi babafazi, elinye lawona maxesha amnandi ebomini babo kodwa ikwangoyena mntu unoxanduva. Ngesi sizathu, ukusuka eBezzia sifuna ukukunika iingcebiso ukuze le nkqubo yenziwa ngokwesiqhelo: ukusuka ekukhulelweni kunye namathandabuzo anokuvela ngeli xesha ukuya kwimfundo yabantwana xa bebancinci.
Kwicandelo le omama Kuya kubakho imixholo emininzi enomdla yabasetyhini abanabantwana: kukutya ntoni ongakutya okanye ongakutyiyo ngexesha lokukhulelwa, ukubaluleka kokudlala kwiintsana, iingcebiso zexesha lokuphuma kwamazinyo okanye indlela yokuziphatha ukuba unomntwana ongaphezulu kwesinye.
Ngokunjalo, ayizukubakho kuphela iingcebiso kunye nolwazi oluluncedo, kodwa iya kuzama ukubonakalisa kwihlabathi elinzima lokuba ngumama. Imeko entsha kubantu abaninzi kodwa leyo iphela iba lelona xesha libalulekileyo ebomini.
Ngaba kufuneka ndibenexhala lokufikisa kwonyana wam kwangaphambili?
por UMaria Jose Roldan yenzayo Iintsuku ze4 .
Ngaphambi kokuba babe mdala, amakhwenkwe ahamba kwinqanaba lokoyikisa. Lukhona utshintsho…
Uyikhetha njani ibrashi yamazinyo efanelekileyo kumntwana wakho
Enye yeendlela abantwana ekufuneka bezifumene besebancinci kukuxubha amazinyo. Ukuba ...
por UMaria Jose Roldan yenzayo Iiveki ze4 .
Abazali kufuneka banike indima ebalulekileyo kwisondlo sabantwana babo. Kulungile ukuba bancinci, ...
por UMaria Jose Roldan yenzayo Inyanga e-1 .
Ukuba uqaphele ukuba umntwana wakho ugoba amazinyo ngelixa elele, kunokwenzeka ukuba unengxaki yokuphazamiseka ...
Bonke abazali bayavuma ukuba ukukhulisa kunye nokufundisa umntwana ayisiyonto ilula kwaye ...
Ungamchonga njani umntwana onetyhefu
Ubuthi abuyongxaki eyenzeka kubantu abadala kuphela, njengoko kunokubakho ...
Ucoceko lwempumlo kwiintsana ngumsebenzi ekufuneka wenziwe ngabazali ngononophelo kwaye kamnandi. Yi…
Isifo sikaCrohn ebantwaneni nakwishumi elivisayo
Izifo ezibangelwa sisisu kunye namathumbu ziya zixhaphaka kwaye zixhaphakile ebantwaneni ...
Uvelwano lelinye lamaxabiso abaluleke kakhulu emntwini. Sisikhundla esi ...
Ungabathintela njani abantwana ekubeni baphuphe kakubi
Yinto eqhelekileyo ukuba abantwana abakubudala obuthile bathambekele ekuphupheni kakubi. Inyani yile ndiyazi ...
Ucoceko olusondeleyo ngexesha lokukhulelwa
Ngaphandle kwenkxalabo yabasetyhini abaninzi abakhulelweyo, ivumba lomzimba elinamandla, ngakumbi kumalungu asenyongweni, yinto ...
Ngaba ukungabikho kwabazali kuyabachaphazela abafikisayo?
Imibuzo neempendulo malunga nokufikisa
Iindlela ezi-6 ezilula zokususa itattoo yethutyana
Ubunzima be-Oedipus kunye ne-Electra, umtsalane wabantwana kubazali babo